I-Cabana La Plai Est: imeko yendalo ye-idyllic - I-Airbnb
I-Cabana La Plai Est: imeko yendalo ye-idyllic
Nantsi indalo yinxalenye yobomi bethu. Siyakumema ukuba uhlale kwindlu edityaniswe kakuhle nemihombiso: iintaba ezinemithi, amasimi aneentyatyambo, iigadi zendalo, iintaka, imibala kunye neziqholo, zonke zikwindawo engaqhelekanga: "La Plai".
Ngaphantsi ungafumana amagumbi okulala amabini aneebhedi ezimbini kunye nebhedi yosana enendawo yokuhlambela esetyenziswa nangabanye abantu, ityeya encinci apho unokonwabela ikofu kunye neendawo ezintle onokuzibona. Ukungena kwenziwe kuphela kwizitebhisi zangaphandle ezikhanyayo.
Ngaphantsi uza kufumana elinye igumbi lokulala elinebhedi elala abantu ababini, igumbi lokuhlala kunye negumbi ledinala apho unokuphumla uze utye. Kwakhona kumgangatho osezantsi kukho ikhitshi elinesitovu, ioveni, i-toaster, umatshini wokwenza ikofu, i-citrus juicer, ifriji, i-microwave oven, izitya kunye nomatshini wokuhlamba impahla.
Kule ndlu kukho iiTV ezimbini, enye phezulu nenye ezantsi kwigumbi lokutyela. Kunye nokungena kwi-Wifi kuyo yonke indlu.
Ngaphandle kukho ityeya enendawo yokoja nesonka, ifriji, isitovu, izixhobo zokujima (ibhayisekile ergonomic, itafile yokuzilolonga, ibhegi yebhokisi kunye ne-stepper), umjikelo, itafile yepuli kunye netafile yeping pong.
Igadi yenye indawo yokuphumla apho ungachitha khona ixesha lakho, kwi-hammock okanye kwisitulo sokuphumla esijikelezwe ziintyatyambo nemithi yeziqhamo. Kwakhona, unokuyijonga bhetele indawo ekujikelezileyo ngokunyuka inqaba yokubukela.
Ukusuka kwindawo apho unokufumana inkcazelo ngayo yonke into equka ukhenketho lwasekuhlaleni: ukunyuka intaba, ii-spa-climatic bath, i-zip line, i-rafting, i-skiing, i-skating, i-sledding, i-ATV rental, uhambo oluya kwiindawo zamatye eBucovina. Kwakhona, uza kufumana iphaneli enenkcazelo ngeendlela zasezintabeni ezikule ndawo. Ungajonga kwakhona iwebhusayithi esemthethweni: agreement-dorna.ro
Ukufikelela kwindawo kwenziwa kwindlela ehamba ngeenyawo. Indawo yokupaka ifumaneka kwindawo ekuyo.
* * * Asiqeshisi ngendawo yabantwana, kuphela ukuba bajoyine abantu abadala.
Indlu iLa Plai ingqongwe yindalo, ibekwe phezu kweenduli, ibe iintaba zenza umgama omde. Yindawo efanelekileyo ukuba ufuna ukubaleka esixekweni uze uphinde udibane nendalo kunye nomoya ococekileyo. Abantwana banokonwabela igadi kunye nendawo yokudlala ekufutshane.
Indawo ithe cwaka, inabantu basekuhlaleni abenza imisebenzi yabo yemihla ngemihla.
Umbuki zindwendwe wamkela kakhulu, uyafumaneka kuzo naziphi na iinkcukacha ngendawo yokuhlala kunye neenkcukacha/amacebiso ngale ndawo.